Miyuu Anthony Martial dib ugu soo laaban doonaa Man United kulanka Axadda ee Liverpool? – Gool FM
(Manchester) 15 Okt 2019. Anthony Martial ayaa la soo warinayaa inuu dib ugu soo laaban doono kooxda Manchester United kulanka Axadda ay la ciyaarayaan Liverpool ee horyaalka Premier League.
23-sano jirkaan ayaa labo gool dhaliyey waxaana uu dhiibay gool kale saddexdiisii kulan ee ugu horreeyey oo uu ciyaaray horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ka hor inta uusan soo gaarin dhaawaca uu garoomada kaga maqnaa tan iyo markaas.
Kooxda Red Devils ayaa ku dhibtooday inay shabaqa soo taabtaan markii uu maqnaa xiddiga reer France, iyadoo Marcus Rashford ay si gaar ah ugu adkaaday inuu qaado culeyska gooldhalinta naadiga.
Shabakadda ciyaaraha ee Sky Sports News ayaa warinaysa in Martial la filayo inuu tababarka kooxda koowaad ee Man United dib ugu soo laabto isbuucaan, taasoo la micno ah inuu fursad xooggan u haysto inuu diyaar u noqdo kulanka ay Axadda soo dhoweynayaan kooxda uu hoggaamiyo tababare Jurgen Klopp.
Man United ayaa ku bilaabatay heerkii ugu xumaa xilli ciyaareedka muddo 30 sanadood ah, waxaana ay leeyihiin sagaal dhibcood siddeed kulan oo ay ciyaareen, iyagoo haatan fadhiya kaalinta 12-aad ee kala sarreynta horyaalka, halka ay 15-dhibcood ka dambeeyaan hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Liverpool.